Waa halkee xarunta loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi iyo gobolka Banaadir? – Kalfadhi
Waa halkee xarunta loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi iyo gobolka Banaadir?
Guddiga Doorashooyinka heer Federaal iyo xubno ka tirsan Guddiga qaabilsan amniga Doorashooyinka, ayaa kormeeray xarunta gaadiidka Booliiska ee magaalada Mogadisu oo loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada kuraasta Gobollada Waqooyi iyo gobolka Banaadir.
Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa todobaadkii hore kulan la qaatay wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Francisco Madeira, waxaana kulanka looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wadda-shaqeynta guddiga iyo hawlgalka Midowga Afrika, gaar ahaan sugidda amniga doorashooyinka.
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta akhrinta 2-aad marsiiyay miisaaniyadda 2021